MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: လီဆူးနဲ့ ရဝမ် တိုင်းရင်းသားဝန်ကြီးမထားဖို့ အဆိုပြုမည်
“၂ဝ၁၅ မှာ ဒီလိုဆက်မရွေးဖို့ ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ အခွင့်အရေးကို ကျမတို့ခံစားနေရတာ နှစ်နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်၊ လီဆူးနဲ့ ရဝမ်ဆိုတာ ကျမတို့ကချင်တိုင်းရင်းသားပါ၊ သူတို့သီးသန့် ဒီလိုမျိုး တိုင်းရင်းသားရေးရာ၊ လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးပေးလိုက်တယ်ဆိုတာ ပြည်နယ်က မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပေါက်ပါတယ်၊ ကျန်တဲ့မျိုးနွယ်စုဖြစ်တဲ့ လော်ပေါ်နဲ့ ဂျိန်းဖောတို့လည်း ဝ.၁ ထက် ကျော်တာချည်းပဲ၊ သူတို့ကိုကျတော့ လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး မရဘူးလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်၊ အဲတော့ ကျမတို့ထဲမှာ သွေးကွဲမှုမဖြစ်အောင် နုတုန်းမကုရင် ရင့်လို့ရှိရင် ကုဖိုမလွယ်တော့ပါဘူး၊ အဲဒါကြောင့်တင်တာပါ”
ဒီအတောအတွင်း ကချင်တိုင်းရင်သား တသီးပုဂ္ဂလ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ မနန်တူးဂျာဟာ လာမယ့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ကချင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီပါတီ ( Kachin State Democracy Party) နာမည်နဲ့ ရှေ့သတင်းပတ်မှာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးမှာ သွားရောက်မှတ်ပုံတင်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အခုတစ်ကြိမ်မှာတော့ နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ခွင့်ပေးဖို့ မျှော်လင့်တယ်လို့ ဒေါက်တာ မနန်တူးဂျာက အခုလိုပြောပါတယ်။
“ကျနော်မြင်တာက အခုနိုင်ငံရေးကို လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ ပါတီထောင်ပြီးလုပ်တာကတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒီဥပဒေဘောင်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုဟာ ပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာတယ်၊ အစိုးရကလည်း တံခါးပိုပြီးကျယ်ကျယ် ဖွင့်ပေးလာတဲ့သဘောရှိတယ်လေ၊ လူကြီးတွေကလည်း ကျနော်တို့ ပါတီလျှောက်ထားတဲ့အပေါ်မှာ အများကြီးသဘောထားကြီးကြီးနဲ့ စဉ်းစားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်မျှော်လင့်ပါတယ်”
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ကချင်ပြည်နယ် တိုးတက်ရေးပါတီ(KSPP) အမည်နဲ့ မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပေမယ့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ခွင့်ပြုချက်မပေးခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ပါတီအသစ်ရဲ့ မူဝါဒကိုတော့ ပြည်ထောင်စု တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်စွာ နေထိုင်နိုင်ရေးနဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးစတဲ့ အချက်တွေ အပေါ်မှာအခြေခံပြီး ပါတီမူဝါဒတွေ ရေးဆွဲတည်ဆောက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
at 8/25/2013 03:56:00 PM
Does Myanmar government recognize them as ethnis groups of Myanmar? If so, it is no problem. We need to kick off them from Kachin state. They will find their own place. we do not need to care of them anymore. They know their history.
Lisu and Rawang are ethnics apart from Kachin?